Beingbụ onye nrụpụta ngwa ngwa nke atọ taa bụ hel | Gam akporosis
Arịrịrị SwiftKey na nsogbu nke ndị mmepe ngwangwa iji cheba ego n’ọrụ ha
Izu a anyị nwere otu n'ime akụkọ kachasị mma n'ime ọnwa ole na ole gara aga ma nwee kiiboodu anyị ji ọtụtụ afọ rụọ ọrụ na gam akporo. Ihe igodo SwiftKey nke gosiputara otu ndi oru mmepe ha chọtara ọsọ ọsọ ọlaedo achọrọ na gam akporo nke a ghọgburu ọtụtụ ndị Europe ogologo oge gara aga ịchọta ala ọhụrụ na akụnụba ebe niile n'ala ndị America. Dị ka ọ dị n'oge gara aga, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole ga-emesị chọta obi ụtọ na ụzọ a nke ọtụtụ mgbalị, ihe egwu na ndakpọ olileanya. Anyị nwere ike ịkpọ aha Instagram, WhatsApp ma ọ bụ SwiftKey, yana ikekwe kwa Snapchat, ọ bụ ezie na ebe a, ha ahọrọla ịga n'ụzọ nke ha site na ịjụ onyinye nde kwuru nke ụlọ ọrụ dị iche iche, gụnyere Facebook.
Nke bụ eziokwu bụ na, ọ bụ ezie na ị nwere ọtụtụ nde ndị ọrụ na-eji ngwa gị kwa ụbọchị iji hazie usoro ha ma ọ bụ pịnye ngwa ngwa na-enye ha ohere ịchekwa ọtụtụ nkeji ụbọchị, ọtụtụ ndị mmepe nke atọ ga-ahapụ ngwa ha rere ya a nnukwu ụlọ ọrụ na-abịa na-amụmụ ọnụ ọchị na akpa na ọtụtụ ego ahụ ghọrọ ọtụtụ narị puku ma ọ bụ ọbụna nde. Nke a emeela SwiftKey na n'ihi isi obodo ahụ nwere ihe ọghọm ọ nwere, ya na ndị ọchụnta ego dị iche iche na-eche ego ahụ etinyeghachiri, yana nsogbu nke monetizing ngwa ahụ, n'ikpeazụ Microsoft na-ahụ maka inweta teknụzụ ahụ amụma akwadoro site na ọgụgụ isi Stephen Hawking n'onwe ya.
1 Ihe atụ SwiftKey
2 Obi ịda mba nke ịnwe ngwà nke nde kwuru
3 Pushbullet, ọdịda ọzọ
Ihe atụ SwiftKey
Anyị na-ekwu okwu banyere ngwa adịla arụnyere na ihe karịrị 300 nde ngwaọrụ na na o nweela nsogbu siri ike iji nwee ike itinye ngwa ya ma weghachite ego a gbalịsiri ike n'ime ọtụtụ afọ, ka anyị kwuo maka ihe egwu ego na ụdị ndị ọzọ na-agakọ na okike nke ụlọ ọrụ gị.
SwiftKey dị maka ọtụtụ afọ na ọnụahịa na-eru $ 4, yabụ na 2014 ọ ga-agbanwe ihe nlereanya ya iji gaa freemium, bụ nke enyere ya ohere itinye ngwa ahụ kpamkpam n'efu na enweghị mgbasa ozi, yana nke enyere ya n'ụlọ ahịa isiokwu iji kpata ya. Dị ka o kwesịrị, na akụkụ SwiftKey, ndị ọrụ na-eji ngwa ahụ kwa ụbọchị ga-azụta isiokwu pụrụ iche ka keyboard ha wee bụrụ ihe pụrụ iche, mana nke a abụbeghị ya.
Gwa anyị, na SwiftKey abụghị otu ndị mmepe abụọ ma ọ bụ atọ, ma ọ bụ ọbụna dị ka Chris Lacy, bụ onye raara onwe ya nye n'ịmepụta ngwa ya, na-agbazi chinchi ma ọ bụ na-agbakwunye interface ọhụrụ nke achọrọ ihe ọmụma, mana anyị nọ n'ihu ụlọ ọrụ nwere oke akụ, nke na-enye gị ohere ịme ka mgbanwe dị iche iche dị iche iche. Ọ bụrụ na anyị gafere ihe isi ike ha na onye nrụpụta dị ka nke a kpọtụrụ aha ma ọ bụ ọnụ ọgụgụ dị nta nke obere otu ndị na-aga n'ihu na-emelite ngwa ha, n'ezie anyị nwere ike ịghọta etu ọtụtụ nsogbu si aga n'ihu na mmepe nke ngwa ndị ahụ.
Obi ịda mba nke ịnwe ngwà nke nde kwuru
N'ikpeazụ, anyị ga-ahụ eziokwu dị mwute na enwere ọtụtụ ndị mmepe tupu a hell karịa tupu nrọ paradise nke bu imeputa ngwa nke aka gi. Enwere ọtụtụ ndị gbalịrị ịchọta ngwọta, mana ọ na-esiri ike ịchọta otu.
Were okwu banyere Chris Lacy, onye nrụpụta Australia Onye Okike Action Launcher na njikọ Afọ. Nkwado ya iji kọwaa ihe kpatara ị ga-eji kwụọ ụgwọ maka onye na-ebido gị dị mfe: M kere ya site ọkọ ma tinye ọtụtụ awa n'ime ya. E wezụga eziokwu na anyị na-ekwu maka onye nrụpụta nke gosipụtara na o nwere nnukwu okike yana na ọ na-adị ndụ na-arụ ọrụ ya, na -emepụta ngwa ngwa dị elu dị ka abụọ ahụ.
Kedu ihe mere? natara nnukwu nkatọ n'ebe niile na imirikiti ndị ọrụ aghọtaghị ihe kpatara ha ga-eji kwụọ ụgwọ maka mmelite nke ngwa ha zụtara n'oge ahụ. Ebe ọ bụ na ịnwe onwe ya ma na-enweghị ike ịghọta na n'azụ ngwa a enwere ọtụtụ ọrụ, Lacy na ndị mmepe ndị ọzọ na-aga n'ihu na-eme ka ụbụrụ ha chọta usoro kwesịrị ekwesị.
Lacy kwuru banyere ohere nke mmelite kwa afọ nke ị ga-akwụ ụgwọ yana na-eme na mbipụta ọhụrụ nke Oku ọrụ, Anyị mụtara na nso nso a rere Link Bubble ya, ihe nchọgharị weebụ magburu onwe ya nwere ọrụ pụrụ iche.
Pushbullet, ọdịda ọzọ
Hapụ onye nrụpụta lekọtara anya ịzụlite, lekọta, kwado, na ahịa nke ngwa ohuru ya, anyị na-ahụ okwu ọzọ pụrụ iche, Pushbullet.
Pushbullet ghọrọ ngwa kachasị amasị ọtụtụ puku na puku ndị ọrụ ka mmekọrịta gị niile faịlụ, clipboards na ọbụna oyiri SMS ozi na kọmputa gị. Site n'otu ụbọchị rue ụbọchị na-esote, na njem a kwalitere nke metụtara ego ya, gara n'ihu ịmanye ndị ọrụ ịkwụ ụgwọ ndenye aha $ 40 na ndị jiri Pushbullet zuru oke. N'ime ụbọchị ole na ole, ha natara nkatọ n'ebe niile na nyocha na-adịghị mma, mana n'ikpeazụ, ha nwere ike ịmalite nzọ kachasị ha ka ụfọdụ ndị ọrụ bụ ndị na-ahapụ ọrụ ha.
Anyị mechara nwee mmetụta na anyị ga-etinye ntakịrị ihe n'akụkụ anyị iji gaa n'ụdị ebe ịkwụ ụgwọ maka ngwa ga-abụ nke ya, n'agbanyeghị na anyị na-amasịkarị "niile nweere onwe ya". Ọ bụrụ na nke a bụ eziokwu, n'ezie anyị ga-ahụ ọtụtụ ụlọ ọrụ na-azụta ihe, mana obere otu ndị nwere ọtụtụ ndị otu nwere ike ịga n'ihu na-agbanwe ngwa ha ma rara onwe ha kpamkpam iji meziwanye ọrụ ha. Ma ọ bụghị ya, oge ọ bụla anyị ga-abawanye ụba na akụnụba nke ngwa dị iche iche na Storelọ Ahịa Play, anyị ga-ejedebe n'ọdịnihu ebe ọtụtụ ụlọ ọrụ atọ ga-achịkwa ọtụtụ ngwanrọ ahụ na-eri azụ pere mpe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Arịrịrị SwiftKey na nsogbu nke ndị mmepe ngwangwa iji cheba ego n’ọrụ ha
Kedu ezigbo isiokwu ọ gụsịrị ịgụ, na-eme ihe atụ ihe yiri nke ahụ.Echere m banyere ọrụ ọgụgụ isi nke ntụgharị uche n'okwu ndị dị ugbu a na ederede yana ederede nke gị, isiokwu mbụ m gụrụ na weebụsaịtị a ma m debanye aha na RSS m.
Ekele gị na omenaala nkwado na nkwado maka ọrụ emere ọfụma, na ọ ka dị adị?
Zaghachi Rosario Esquivel
Spage Grunts bụ roguelike sitere na OrangePixel
Samsung Galaxy S7 ndụ batrị ga-adịgide ụbọchị abụọ na otu ụgwọ [emelitere]